AKUKHO MDLALO AKUKHO XESHA LOBOMI LOMHLA WOKUKHUTSHWA KWECANDELO, ICAST, IPLOTI KUNYE NAYO YONKE INTO EKUFUNEKA UYAZI - ANIME
Inoveli ekhanyayo ebizwa ngokuba 'Akukho Mdlalo akukho Bomi' luthotho lwe-anime yaseJapan ekhokelwa ngu-Yu Kamiya. Incwadana elula
Inoveli ekhanyayo egama linguMdlalo akukho buBomi luluhlu lweeanime zaseJapan ezalathiswa nguYu Kamiya. Inoveli elula yinoveli yabantu abadala esencinci, ebhalwe ngokukodwa kubafundi baseJapan abahamba isikolo samabanga aphakamileyo. Inoveli elula ikwabizwa ngokuba yiRanobe. Ke, ibali lale noveli ilula lijikeleza iseti yabakhuphisana abakhuphisana nabanye ukuzama ukufikelela kulawulo kuthixo wemidlalo.
Ileta kaMF Bunko ikhuphe iincwadi ezilishumi kwisithuba seminyaka emithandathu. Ukusukela nge-25 ka-Epreli 2012 ukuya kwi-25 kaJanuwari 2018, nganye nganye, ezi ncwadi zapapashwa. Ngo-2013, uMashiro Hiiragi, inkosikazi yombhali weencwadi, waqala wazibhala ezi ncwadi kuthotho lwee-manga kwi-comic yenyanga nganye ephilayo. Emva kwexesha, uMadhouse wacacisa ukuba olu luhlu lwee-comic comic luya kuqulunqwa ukuze lwenze uthotho lwe-anime.
Akukho Mdlalo Akukho Bomi beXesha lesi-2 bonisa iiNkcukacha
Idisgesis imalunga noSora kunye noShiro, ababumba iqela elingenakufikeleleka lomdlalo. Babiza iqela labo ngokuthi 'Alinanto.' Kungekudala, umntu ochongwe njengoTet waya kubo kwi-Intanethi. Lo mntu weTet uzingqine 'njengoThixo Oyinyaniso Oyedwa' kwaye wabiza uSora noShiro ngechess. Sothuka xa uSora noShiro boyisa uTet. Emva kwexesha, iTet yababuyisela kwinyani ephindaphindayo. Elinye iqela lalibizwa ngokuba yiDeshibhodi. Kwi-Disboard, yonke into ilawulwa yimidlalo. Apha kweli ziko liphindaphindayo, amawele onke alungele ukoyisa ulungelelwaniso olwahlukileyo olu-16.
Ngaphandle kolu ngcelele luyinto yonke malunga nocwangciso lobuchule, luza kwakhona phantsi kohlobo lokuhlekisa. Ikwafumene indumiso enkulu kubaphulaphuli kwaye yafumana ukuqondwa okuhle nayo. Nangona kunjalo, kwakungekho zindaba malunga AKUKHO GAME AKUKHO BOMO emva kwexesha layo lokuqala. Ngokusekwe kwincwadi yesithandathu kwezi zilishumi, imveliso kaMadhouse ikhuphe i-prequel ebizwa ngegama elithi 'Akukho Mdlalo Akukho Bomi: Zero.' Kodwa ngaphandle koku, azikho ezinye iindaba okanye uhlaziyo.
Akukho Mdlalo Akukho Xesha loBomi lesi-2 Imeko yokuhlaziya kunye noMhla wokuKhutshwa
Ukuza kuthi ga ngoku, akubangakho saziso sisemthethweni esivela kubalawuli okanye abavelisi beNo Game No Life malunga nomhla wokukhutshwa. Nangona kunjalo, kubonakala ngathi, ngaphandle komlandeli omkhulu olandelayo wale sitcom, uMadhouse akananjongo zokuzisa ixesha lesibini lolu ngcelele ebomini. Kungenzeka ngenxa yesiganeko se-2014 esibandakanya umbhali wokuqala wechungechunge, uYuuKamiya. UKamiya watyholwa ngokuqhatha umsebenzi wabanye ababhali, ngokwe-The Storify News-Times. U-Kamiya wade waxolisa kubadali kwaye wathembisa ukubabuyisela ngomsebenzi awayewenza.
Nangona kunjalo, akukho Kamiya okanye Madhouse ukubhengeze ngokusesikweni ukurhoxiswa komboniso owaziwayo, ke le yithiyori nje. Ngenxa yoko, abalandeli bayaqhubeka nokucinga ukuba iMadhouse izakubuyisa i-anime kwakamsinya.
Akukho Mdlalo Akukho Bomi beXesha lesi-2 ngeNkcukacha
Ukusukela ngoku kungekho kubhengezwa ngokusesikweni malunga nokukhutshwa kweMidlalo engenabo uBomi 2, asinakho ukuphawula ngamalungu afanayo ngokufanayo. Abadlali belizwi lokuqala kwiXesha loku-1 baya kuphinda baqhubeke nendima yabo kwiXesha lesi-2. Oku kubonisa uYoshitsugu Matsuoka kunye noAi Kayano, abadlala abalinganiswa abaphambili uSora kunye noShiro kunye noScott Gibbs noCainlynn French, abadlala amaqabane abo esiNgesi. Kuyenzeka, nangona kunjalo, ukuba oku kungangomzekelo.
Akukho Mdlalo Akukho siXesha soBomi sesi-2 esilindelekileyo
Eyokuqala yayisekwe kwincwadi yesi-3 yeencwadi ezilishumi eziphantsi kuka-M F Bunk Label. Ke, kwixesha lesibini, sinokulindela ukuba abavelisi baqhubeke ukusuka kwincwadi ye-4th yelebheli. UShiro noSora babesandula ukoyisa i-Eastern Federation kwaye badibana ne-Elkian Empire ekupheleni kwexesha le-1. Ngelixa esi sigqibo singayilandeli ngokupheleleyo inoveli ekhanyayo, ayiphambuki ngokwaneleyo ukuba inokuthi ithintele ixesha lesi-2 ukuba lingaqhubeki apho liyeke khona.
Yonke imeko ixhomekeke kwisicwangciso sikaMadhouse sokubuyisa i-franchise eyaziwayo ebomini. Abalandeli banokuthandaza kuphela kwaye banethemba lokuba abalinganiswa babo ababathandayo baya kubuya kwiXesha lesi-2 ukuba kuye kwenzeka.
bukela ipaki esemazantsi kwi-hulu
Eyona midlalo yevidiyo xbox 360
I-olympus iwile 4
uphuma nini u-conjuring 4?
iingqondo zolwaphulo-mthetho inani lamaxesha onyaka